Ogaden News Agency (ONA) – Maalinta Cuntada Aduunka (World Food Day) – Dr. Maxamuud Ugaas: Gaajada Ogadenya waxaa sabab u ah
Maalinta Cuntada Aduunka (World Food Day) – Dr. Maxamuud Ugaas: Gaajada Ogadenya waxaa sabab u ah
Posted by ONA Admin	/ October 17, 2012
16ka Oktoobar ayay haya’adda caalamka u qaabilsan Cuntada iyo Beeraha ee loo yaqaano FAO (Food and Agricultural Organization) u aqoonsatay 1979 inuu yahay maalin caalamka laga xuso. Maalintaa 16ka Oktobar ayaa ku began maalintii la asaasay haya’ddan 1945. Waxaa hadaba meela badan oo caalamka ah laga xusaa maalintaa iyadoo la qiimaynayo heerka beeraha iyo kaydka cuntada ee dalkaasi. Sidaa daraadeed waxaynu isku dayi doonaan in aan dul kooban ku samayno beeraha iyo cuntada dalka Ogadenya heerkuu ahaan jiray iyo heerka uu hadda joogo.
Ogadenya xusuusta dhow ee gaadhaysa 1950meeyadii waxay ahayd meesha laga quudiyo (the Bread basket) dalalka dariska ah, gaar ahaan Somaliya oo dalaga ka soo baxa Ogadenya ay ku filnayd oo loo iib gayn jiray badhtamada Somaliya ilaa iyo Jabuuti. Hasa ahaatee, wixii ka dambeeyay dagaalkii gobanimadoon ee bilowday 1962gii waxuu qaatay gumaysiga Itobiya go’aan ah in shacabka Somaliyeed ee Ogadenya lagala dagaalamo nolosha oo laga sinmo saboolnimo iyo jahli iyo cuduro. Hadafkuna wuxuu ahaa inay dadka badankii ka qaxaan dalka oy u cararaan Somaliya. Waxay ahayd siyaasad qorshaysan in dadka lagala dagaalamo nolosha oo laga curyaamiyo waxkasta oo u sahli kara inay ka fikiraan wax dhaafsan nolol maalmeedkiisa. Siyaasadii noocaa ahayd waxba iskama badalin 3exdii maamul ee soo maray dalka Itobiya midwalba wuxuu fulinayay siyaasadaa ah in shacabka Somaliyeed ee Ogadenya dalka laga qixiyo inta soo hadhana lagu jahawareeriyo maamul xumo, dagaal dhexdooda ah, cunidda jaadka, dhaqan xumo kale oo ay ka mid yihiin khamriga iyo dhaqanada faafiya cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka.
Ogadenya hantida ay leedahay iyo khayraadkeeda dabiiciga ah ee gumaysiga Itobiya uu isha ku hayo, hasa ahaatee laga xanibay dadkii lahaa oo gaajo ay uga dhamaanayaan waxaa si fiican uga xogwaramay Dr. Muxumud Ugas Muxumad daraasadii uu ka akhriyay shir-cilmiyeedkii IHASA. Daraasadaa qiimaha badan waxaa ka mid ahaa shaxdan muujinaysa balaadhka dhul beereedka waraabi kara ee Ogadenya;
CULTIVABLE VALLEY (hctr)
Wuxuu intaa raaciyay Dr. Maxamud Ugas in Itobiya lagula taliyay inay dhulkaa dajiso dadkeeda buuraha saaran oo 2050ka gaadhi doona sida uu qoray Bangiga Aduunka oo taladaa lahaa 150 malyan oo qof. Talada uu Bangiga Aduunka siiyay Itobiya ayuu biyadhaceedu ahaa; Dhul-beereed balaadhan oo aan la isticmaalin ayuu dalka leeyahay ee ka faa’idaysta dhulka dihin ee wabiyada ay maraan ee banka fidsan ah (oo ah Ogadenya). Waxaa jira 4 milyan oo Hektaar oo waraabi kara .. (There is a lot of land in the country that is not used. There is a limit to how many livelihoods can be sustained on the highlands. Take advantage of the rivers in the fertile plains in the lowlands. There are three to four million hectares that could be irrigated.  IRIN. 22 Aug. 2003.)
Dr. Maxamuud Ugaas oo ka jawaabaya taladaa la siinayo Itobiya ayaa qoray; Waxay arintaaa si dhab ah u muujinaysaa horumarka lala doonayo dadka buuralayda daga oo laga xaaraantimaynayo Somalidii dhulka lahayd .. ( This is clearly the enhancement of the highlanders and a deprivation of the local Somalis in the very expense of their own lands.)
Daraasada uu Dr. Maxamud Ugaas soo bandhigay waxaa kaloo ka mid ahaa xoolaga nool ee dadlka Ogadenya uu hodanka ku yahay. Shaxdan ayuuna ku soo bandhigay
Dr. Maxamud Ugas wuxuu ku soo bandhigay shir-cilmiyeedkii IHASA daraasaad uu si tafatiran ugu warbixiyay siyaabaha ay xukuumadda Itobiya ee EPRDF u curyaamisay dhamaan mashaariicdii loogu talagalay dalka Ogadenya ee maalgalinteeda uu lahaa caalamka. Wuxuu soo bandhigay Dr. Maxamud Ugaas oo mashaariicdaa qaar badan ka soo shaqeeyay inay Itobiya gabi ahaanba baabi’iso mashruuc kasta oo dalka Ogadenya laga hirgaliyo marka uu noqdo taabagal oo la arko inuu yahay mid dadweynaha waxtar u leh.
Daraasadaa qiimaha leh wuxuu u muujinayaa inay tahay riyo beenaad qofkasta oo raja ka qaba inuu dalkeena horumar gaadhi karo inagoon gumaysiga ka xoroobin. Horumarka uu gumaysi walba u soo bandhigo shucuubta uu gumaysto waa mid ku salaysan dhismo iyo wadooyin oo badankood masaahriicdaa loogu talagalayo inuu gumaysiga qudhiisa ka faa’idaysto una sahlo dhaq-dhaqaaqiisa iyo nolosha shacabkiisa uu ku beerayo dalka. Hoos ka akhri darasadii uu Dr. maxamad Ugaas ku soo bandhigay shir-cilmiyeedkii IHASA;